Waqtiga Dhexe ee Bartamaha (CET)
Waqtiga Dhexe ee Bartamaha (CET), oo loo isticmaalo qaybo badan oo Europe ah iyo qaar ka mid ah wadamada Waqooyiga Afrika, waa wakhti caadi ah kaas oo ah 1 saac ka hor Iskuduwida Universal Time (UTC). Waqtiga ka baxsan UTC waxaa loo qori karaa +0: 00. Waqti isku mid ah, UTC + 01: 00, ayaa sidoo kale loo yaqaanaa waqtiga Yurubta dhexe (MET, Jarmal: MEZ) iyo magacyo kale sida Berlin Time, Romance Standard Time (RST), Paris Time ama Rome Time.
Qeybta 15-aad ee bari-galbeed waa bartamaha dhexe ee UTC + 01: 00 ee nidaamyada adduunka ee waqtiga aagagga.
Laga soo bilaabo 2011, dhammaan wadamada xubnaha ka ah Midowga Yurub waxay fiiriyaan waqtiga xagaaga; kuwa isticmaala inta lagu jiro xilliga jiilaalka CET waxay isticmaashaa waqtiga dhexe ee xagaaga ee CEST (CEST) (ama: UTC + 02: 00, wakhtiga badbaadinta wakhtiga dayrta) xagaaga (laga bilaabo Axada hore ee Maarso ilaa Axadda hore ee Oktoobar).
Dalal badan oo Afrikaan ah ayaa isticmaala UTC + 01: 00 oo dhan sanadka oo dhan, halkaasoo loogu yeero West Africa Time (WAT), inkastoo Algeria iyo Tunisia ay sidoo kale isticmaalaan ereyga Central European time.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Central_European_Time&oldid=221526"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 26 Oktoobar 2021, marka ee eheed 10:44.